အစားအစာနှင့် ချင့်ချိန်ဘောင်ခတ်၍ စားရသော အစားအစာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ - Myanmar Network
အစားအစာနှင့် ချင့်ချိန်ဘောင်ခတ်၍ စားရသော အစားအစာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ
Posted by Language Republic on October 8, 2015 at 11:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အစားအစာ၊ ချက်ပြုတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့် diet အကြောင်း သင်ပြောဆိုရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် စကားလုံး အသုံးအနှုန်း အချို့ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
meat (or "red meat") (အသား (သို့) နို့တိုက်သတ္တ၀ါတို့၏ အသား) = lamb, pork or beef (သိုးသား၊ ၀က်သား (သို့) အမဲသား)
poultry (or "white meat") (ခြံမွေးငှက် သတ္တ၀ါ (၎င်း တို့၏ အသား))= chicken, turkey, goose, duck (ကြက်၊ ကြက်ဆင်၊ ငန်း၊ ဘဲ)
game ("wild" meat) (တောကောင်သား (တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်သား)) = rabbit, hare, partridge, pheasant (ယုန်၊ တောယုန်၊ ခါငှက်၊ ရစ်ငှက်)
fish (ငါး) = salt water fish / sea fish or fresh water fish (ရေငန်ငါး ၊ ပင်လယ်ငါး (သို့) ရေချိုငါး)
seafood (ပင်လယ်စာ) = prawns, shrimps, lobster, scallops, mussels, crab (ပုစွန်တုပ်၊ ပုစွန်ဆိတ်၊ ကျောက်ပုစွန်၊ ခုံးကောင်၊ ယောက်သွားကောင်၊ ဂဏန်း)
vegetables (ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ) = leafy vegetables (such as broccoli or spinach), root vegetables (such as carrots and onions) etc (အရွက်များသော ဟင်းသီးဟင်းရွက် (ဥပမာ - ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း (သို့) ဒေါက်ခွရွက်) ၊ အမြစ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် (ဥပမာ - မုန်လာဥ၀ါ (သို့) ကြက်သွန်နီ))
fruit (အသီးအနှံများ) = soft fruit (such as plums and peaches); berry fruit (such as strawberries or raspberries) etc (အစေ့ကြီးမပါသော အသီး (မက်မန်းသီး နှင့် မက်မွန်သီးကဲ့သို့သောအသီးများ)၊ ဘယ်ရီသီး (စတော်ဘယ်ရီ (သို့) ရတ်စဘယ်ရီသီး ကဲ့သို့သော အသီမျးား) အစရှိသည်)
အစားအစာအုပ်စုအမျိုးမျိုးများ အကြောင်းကိုလည်း ပြောနိုင်ပါသေးသည် - fats and oils အဆီနှင့် ဆီများ (သံလွင်ဆီ၊ ထောပတ် အစရှိသည်တို့)၊ fruit အသီးအနှံ၊ vegetables ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ protein အသားဓါတ် (အသား အစရှိသည်)၊ dairy နို့ထွက်ပစ္စည်းများ (နွားနို့၊ ဒိန်ခဲနှင့် ဒိန်ချဉ် အစရှိသည်တို့)၊ grains နှံစားပင်များ (ဂျုံ (သို့) ပြောင်း အစရှိသည်တို့) နှင့် သကြား။)
boiled - ဆူပွက်နေသည့်ရေထဲတွင် ချက်ပြုတ်ထားသည်
steamed - ဆူပွက်နေသည့်ရေထည့်ထားသည့် လက်ကိုင်ဒယ်ထဲတွင် ချက်ပြုတ်ထားသည်
fried / sauteed - အကြော်ဒယ်ပြားထဲတွင် ဆီနှင့် ကြော်ထားသည်
stir-fried - ဆီပူထဲတွင် မြန်မြန်ကြော်သည်
pan-fried - လက်တိုဒယ်ပြား (frying pan) ဖြင့် ကြော်သည်
roasted - ဖို (oven) ထဲတွင် ဆီနှင့် ကင်သည်
grilled - အထက်မီးပေး၍ ချက်သည် (သို့) ကင်ပျစ်အိုး (ridged pan) ဖြင့် ချက်သည်
baked- ဖို (oven) ထဲတွင် ဖုတ်ထားသည်
stewed – မီးနည်းနည်းဖြင့် အချိန်ကြာကြာ ချက်သည်
casseroled – juices (အသားစိမ်းမှထွက်သာ အရည်မျာ) တွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ချက်သည်
စားသောက်ဆိုင်၏ ဟင်းလျာစာရင်းတွင် တွေ့မြင်နိုင်သော ဟင်းပွဲအမည်အချို့ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်
starter / hors d'oeuvre / appetiser = ဟင်းအမည်အပြည့်အစုံ တည်ခင်းဧည့်ခံသော ထမင်းစားပွဲ (formal meal) တွင် ပထမဆုံး စားရသော ဟင်းအမည် (အမြည်း)
main course = များသောအားဖြင့် အသား၊ ငါး (သို့) သတ်သတ်လွတ်ဟင်းပွဲ (အဓိက ဟင်းပွဲ)
dessert / pudding = အစားစားပြီးနောက်ဆုံးတွင် ရှိသော အချိုပွဲ။ ဒိန်ခဲ (သို့) အသီးအနှံများ ကိုလည်း တွေ့ရရှိနိုင်သည်။ (အချိုပွဲ ၊ ပူတင်း)
စားသောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စကားလုံး၊ စကားစုများ
အကယ်၍ သင်သည် ရှိသင့်သည့် ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ပိုနေ (သို့) အလွန်အမင်း အ၀လွန်နေပါက သင်၏ ဆရာဝန်သည် သင့်အား အစားအသောက်ပုံစံ ပြောင်းလဲရန် အကြံပြုပါလိမ့်မည်။ အောက်တွင် စားသောက်သည့်ပုံစံများ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ပြောဆိုသည့်အခါတွင် အသုံးပြုသည့် စကားလုံးများနှင့် စာကြောင်းများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
watch what you eat = သင်စားသောက်သည့်အရာနှင့် ပမာဏကို ဂရုစိုက်ပါ
watch your figure = ခန္ဓာကိုယ် သွယ်လျစေချင်သည့်အတွက် အချို့သော အစားအစာများကို ငြင်းပယ်သည်
go onacrash diet = လျင်မြန်စွာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေရန်အတွက် ပြင်းထန်သော diet (radical diet) ကို အစပြုသည်။
count the calories /acalorie-controlled diet = သင်စားသောက်သည့် အစားအသောက် တစ်ခုခြင်းဆီ၏ ကယ်လိုရီကို တိုင်းတာသော diet
snack between meals = ထမင်းစားချိန်တစ်ချိန်နှင့် တစ်ချိန်ကြား၌ စားသောက်ခြင်း၊ (diet လုပ်နေပါက ဤသို့ စားသောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ
cut out = (ပေါင်မုန့် (သို့) အီတလီခေါက်ဆွဲခြောက်ကဲ့သို့သော) အချို့သော အစားအစာများကို လုံးဝ မစားတော့ခြင်း
cut down on = ( ဥပမာအနေဖြင့် အဆီ (သို့) သကြားဓါတ်မျာသည့် အစာများ) ကို လျှော့ချသည်
ခန္ဓာကိုယ် အရွယ်အစာနှင့် အလေးချိန် တိုးလားခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ
You are what you eat! = သင့်ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားသည် သင်စားလိုက်သည့် အစားအစာ (သို့) ပမာဏနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် အသုံးများသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်
middle-age spread = အထူးသဖြင့် သင့် ခါးနှင့် တင်ပါးတစ်ဝိုက်တွင် အလေးချိန်တိုးလာခြင်းကို ဆိုလိုသည် (ဗိုက်ရွှဲလာခြင်း)
put on / gain weight = ပိုမို လေးလံလာသည်
pinch an inch = သင့်ခါးတွင် အဆီထု တစ်လက်မခန့် တိုင်းတာနိုင်ခြင်း။ (တစ်လက်မသည် ခန့်မှန်းခြေ ၂.၅ စင်တီမီတာ ရှိသည်။
pile on the pounds = အလေးချိန် များစွာ တိုးလာသည် (၁ ပေါင်သည် အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ကီလိုဝက် ရှိသည်
lose / shed weight = အလေးချိန်လျော့လာသည်
go upasize = ဆိုက် (size) တစ်ဆိုက် ပိုကြီးလာခြင်း (ဆန့်ကျင်ဘက် အသုံးအနှုန်း - dropasize = ဆိုက် တစ်ဆိုက် ပိုသေးသွားခြင်း)
haveasweet tooth = ချိုသော (သို့) သကြားပါသည့် အစားအစာများဖြစ်သည့် ကိတ်မုန့်၊ သကြားလုံး (သို့) ချောကလက်များ စားရခြင်းကို နှစ်သက်သည်
eat sensibly = အစားအသောက်ပမာဏကို သင့်တင့်သည့် ပမာဏသာ စားပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် မသင့်တော်သည့် အစားအသောက်များကို အလွန်အကျူး မစားသောက်ခြင်း
fiveaday = အသီးအနှုံ (သို့) အသီးအရွက်များကို နေ့တိုင်း တစ်ယောက်စာပမာဏ (၅) ပုံစားခြင်း
English-at-home.com မှ English food and diet vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Arkar Kyaw on October 8, 2015 at 16:11
I haven't eaten japanese food.Are you?
Permalink Reply by Thetnaing Win on October 8, 2015 at 17:16
Permalink Reply by Zinmar Nwe on October 8, 2015 at 17:57
Permalink Reply by Zaw Htay Aung on October 9, 2015 at 15:00
It'sanice post, thank u so much
Permalink Reply by Missy Candy on October 20, 2015 at 14:47